Dulmarka Shiinaha iyo astaamaha qalabka kontoroolada socodka socodka Soo saaraha iyo Badeecada | Guorui
Dulmarka guud iyo astaamaha furayaasha xakamaynta socodka
Waalka xakamaynta qulqulka waa waalka ku tiirsan beddelka caabbinta dareeraha ee madaxa si loo xakameeyo qulqulka isha ee farqiga u dhexeeya farqiga qaarkood, taas oo markaa lagu hagaajinayo xawaaraha dhaqdhaqaaqa ficilka (silsiladda korantada ama matoorrada korantada). Inta badan waxaa ku jira waalka gawaarida, qalabka xakamaynta xawaaraha, waalka gawaarida qulqulaya iyo qalabka wax lagu soo ururiyo. Foomka rakibidda waa rakibid jiif ah. Habka isku xirnaanta wuxuu u qaybsan yahay nooca flange iyo nooca dunta; nooca alxanka. Hababka xakamaynta iyo hagaajinta ayaa loo qaybiyaa otomaatig iyo buug.
Qalabka xakamaynta qulqulka, oo sidoo kale loo yaqaan '400X qulqulka qulqulka qulqulka', waa qalab kala-bax ah oo adeegsada hab tijaabo ah oo sax ah si loo xakameeyo socodka.
1. Isbeddel ku yimaada mabda'a ah in la yareeyo aagga biyo-mareenka iyadoo la adeegsanayo saxan madax-furfuran ama mashiinka wax-u-garaaca mashiinka, iyadoo la adeegsanayo fureyaal tijaabo ah oo la xiriira si loo yareeyo tamar-la'aanta ku jirta geedi socodka qulqulka
2. Dareenka xakamaynta sare, nabadgelyada iyo isku halaynta, khaladka fudud iyo nolosha muddada dheer.
Qalabka xakamaynta socodka ayaa si otomaatig ah u gaari kara isu-dheellitirka socodka nidaamka iyada oo aan la helin koronto dibadda ah. Qulqulka socodku wuu xadidan yahay iyadoo la ilaalinayo farqiga cadaadiska ee u dhexeeya hore iyo gadaal ee furitaanka (aperture aperture) oo joogto ah, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa waalka socodka joogtada ah.
Ujeedada waalka socodka joogtada ahi waa socodka, kaas oo xidhi karaya xaddiga biyaha ee maraya bawdada, maaha dheelitirka caabbinta. Wuxuu xallin karaa dhibaatada isku dheelitir la'aanta firfircoon ee nidaamka: si loo ilaaliyo hawlgalka waxtarka sare ee hal qaboojiye, kululeeyaha, munaaradda qaboojinta, kala beddelaha kuleylka, iwm, waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo qulqulka qalabkan si loogu hagaajiyo qiimaha la qiimeeyay; laga bilaabo dhamaadka nidaamka, si looga fogaado Saameynta wadajirka ah ee hagaajinta firfircoon waxay sidoo kale u baahan tahay xaddidaadda qulqulka qalabka ugu dambeeya ama laanta.
Dhibaatada ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho naqshadeynta, qasaarooyinka korantada xakamaynta socodka ayaa ah in waalka uu leeyahay ugu yaraan farqiga shaqada ee looga baahan yahay. Alaabada guud waxay ubaahantahay ugu yaraan farqiga cadaadiska shaqada ee 20KPa. Haddii lagu rakibo meesha ugu xun ee aan fiicnayn, waxay si qasab ah ugu baahan doontaa bamka biyaha wareega inuu ku kordho 2 mitir oo tiirarka biyaha ah. Madaxa shaqeynaya waa in lagu rakibaa dhamaadka ugu dambeeya oo aan fiicnayn dhamaadka fog. Ha ku rakibin qalabkan koontaroolka socodka markii isticmaaluhu ka maqanyahay isha kuleylka in ka badan 80% ee gacan kuleyliyaha.
Qiyaasta suuqa anrimride ee Trimellitic, caalami ah ...